Esinye sezici ezintsha ze-Blogger ukuthi ungasingatha uhlelo lokusebenza esizindeni sakho. (Ngibonile ukuthi banikela ngokusebenzisa ukungena ngemvume kwe-Akhawunti yakho ye-Google kungxenyekazi entsha, nakho. Kuhle lokho). I-WordPress inikele ngokubamba ibhulogi yakho, yenza ngokwezifiso itimu yakho, ingeza ama-plugins, njll isikhashana manje. Ngikholwa ukuthi ngesinye sezizathu ezisemqoka zokuthi kungani ngikhethe i-WordPress… bengifuna ukuba nesizinda sami. Kungani? Inkinga ngokuqala kwe-